समाचार - लेजर काट्ने मेसिन को विभिन्न काट्ने तरिका
लेजर काट्ने मेसिन को विभिन्न काट्ने तरिका
लेजर काट्ने उच्च ऊर्जा र राम्रो घनत्व controllability संग एक गैर सम्पर्क प्रसंस्करण विधि हो। उच्च ऊर्जा घनत्व संग लेजर स्थान लेजर बीम, जो काटन मा प्रयोग गर्दा धेरै विशेषताहरु छन् ध्यान केन्द्रित पछि गठन गरीन्छ। त्यहाँ लेजर काट्ने को चार अलग अलग तरीका क्रम मा बिभिन्न परिस्थितिहरु संग सम्झौता गर्न को लागी छन्।
1. पिघल काट्ने
लेजर पिघ्ने काट्ने मा, पिघलिएको सामग्री एयरफ्लो को माध्यम बाट बाहिर निकालीन्छ workpiece स्थानीय रूपमा पिघल पछि। किनभने सामग्री को स्थानान्तरण मात्र यसको तरल अवस्था मा हुन्छ, यो प्रक्रिया लेजर पिघ्ने काट्ने भनिन्छ।
उच्च शुद्धता अक्रिय काट्ने ग्यास संग लेजर बीम पिघलाएको सामग्री भट्ठा छोड्छ, जबकि ग्यास आफै काट्न मा संलग्न छैन। लेजर पिघ्ने काट्ने ग्यासीफिकेशन काट्ने भन्दा उच्च काट्ने गति प्राप्त गर्न सक्दछ। ग्यासीफिकेशन को लागी आवश्यक ऊर्जा सामान्यतया सामग्री पिघ्न को लागी आवश्यक ऊर्जा भन्दा बढी हुन्छ। लेजर पिघ्ने काट्ने मा, लेजर बीम मात्र आंशिक अवशोषित हुन्छ। अधिकतम काट्ने गति लेजर शक्ति को वृद्धि संगै बढ्छ, र प्लेट मोटाई र सामग्री पिघ्ने तापमान को वृद्धि संग लगभग उल्टो घट्छ। एक निश्चित लेजर शक्ति को मामला मा, सीमित कारक भट्ठा मा हावा को दबाव र सामाग्री को थर्मल चालकता हो। फलाम र टाइटेनियम सामाग्री को लागी, लेजर पिघल काटने गैर अक्सीकरण notches प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। इस्पात सामाग्री को लागी, लेजर शक्ति घनत्व 104w / cm2 र 105W / cm2 बीच छ।
2. वाष्पीकरण काट्ने
लेजर गैसिफिकेशन काट्ने प्रक्रिया मा, सामग्री सतह को तापमान को गति उबलने बिन्दु तापमान मा बढ्दै छ यति छिटो छ कि यो गर्मी को प्रवाह को कारण पिघलने बाट बच्न सक्छ, त्यसैले केहि सामाग्री भाप मा गायब हुन्छ र गायब हुन्छ, र केहि सामाग्री बाट उडाईन्छ ejecta को रूप मा सहायक ग्यास प्रवाह द्वारा सीम काट्न को तल। धेरै उच्च लेजर शक्ति यस मामला मा आवश्यक छ।
भट्ठा पर्खाल मा संघनन बाट सामाग्री वाष्प रोक्न को लागी, सामाग्री को मोटाई लेजर बीम को व्यास भन्दा धेरै ठूलो हुनु हुँदैन। यो प्रक्रिया तेसैले मात्र अनुप्रयोगहरु को लागी उपयुक्त छ जहाँ पिघलाएको सामग्री को उन्मूलन बाट बच्नै पर्छ। वास्तव मा, प्रक्रिया मात्र फलाम आधारित मिश्र को उपयोग को एक धेरै सानो क्षेत्र मा प्रयोग गरीन्छ।
प्रक्रिया यस्तो काठ र केहि सिरेमिक, जो एक पिघला राज्य मा छैन र सामाग्री वाष्प पुनः संयोजित गर्न को लागी संभावना छैन जस्तै सामग्री को लागी प्रयोग गर्न सकिदैन। यसको अतिरिक्त, यी सामाग्री सामान्यतया एक मोटो कटौती प्राप्त गर्न को लागी छ। लेजर गैसीकरण काटने मा, इष्टतम बीम फोकस सामाग्री मोटाई र बीम गुणस्तर मा निर्भर गर्दछ। लेजर शक्ति र वाष्पीकरण को गर्मी इष्टतम फोकल स्थिति मा मात्र एक निश्चित प्रभाव छ। अधिकतम काट्ने गति उल्टो सामग्री को gasification तापमान आनुपातिक हो जब प्लेट को मोटाई निश्चित छ। आवश्यक लेजर शक्ति घनत्व १०8W / cm2 भन्दा ठूलो छ र सामग्री मा निर्भर गर्दछ, गहिराई र बीम फोकस स्थिति काट्ने। प्लेट को एक निश्चित मोटाई को मामला मा, त्यहाँ पर्याप्त लेजर शक्ति छ भन्ने मान्दै, अधिकतम काट्ने गति ग्यास जेट गति द्वारा सीमित छ।
3. नियन्त्रित फ्रैक्चर काटने
भंगुर सामग्री को लागी जुन गर्मी द्वारा क्षतिग्रस्त हुन को लागी सजीलो हो, लेजर बीम हीटिंग द्वारा उच्च गति र नियन्त्रणयोग्य काटने लाई नियंत्रित फ्रैक्चर काटन भनिन्छ। यो काट्ने प्रक्रिया को मुख्य सामग्री हो: लेजर बीम भंगुर सामाग्री को एक सानो क्षेत्र, जो एक ठूलो थर्मल ढाल र यस क्षेत्र मा गम्भीर मेकानिकल विरूपण, सामग्री मा दरारहरु को गठन को लागी नेतृत्व गर्दछ। जब सम्म एक समान हीटिंग ढाल बनाए राखिएको छ, लेजर बीम कुनै पनी वांछित दिशा मा दरार को पीढी मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ।
4.Oxidation पिघलने काट्ने (लेजर ज्वाला काट्ने)
सामान्यतया, निष्क्रिय ग्यास पिघ्न र काट्ने को लागी प्रयोग गरीन्छ। यदि अक्सिजन वा अन्य सक्रिय ग्याँस को सट्टा प्रयोग गरिन्छ, सामग्री लेजर बीम को विकिरण अन्तर्गत प्रज्वलित गरिनेछ, र अर्को गर्मी को स्रोत अक्सिजन को साथमा रासायनिक रिएक्शन को कारण सामग्री लाई थप गर्मी को लागी उत्पन्न गरिनेछ, जसलाई अक्सिडेशन पिघल र काट्ने भनिन्छ। ।
यस प्रभाव को कारण, उही मोटाई संग संरचनात्मक इस्पात को काट्ने दर पिघलने काट्ने को तुलना मा उच्च हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, चीराको गुण पिघल काट्ने भन्दा खराब हुन सक्छ। वास्तव मा, यो फराकिलो slits, स्पष्ट खुरदरापन, वृद्धि गर्मी प्रभावित क्षेत्र र खराब किनारा गुणस्तर उत्पादन हुनेछ। लेजर ज्वाला काट्ने परिशुद्धता मोडेल र तेज कुनाहरु मशीनिंग मा राम्रो छैन (त्यहाँ तेज कुनाहरु जलाउने खतरा छ)। पल्स मोड लेजर थर्मल प्रभाव सीमित गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ, र लेजर को शक्ति काट्ने गति निर्धारित गर्दछ। एक निश्चित लेजर शक्ति को मामला मा, सीमित कारक अक्सिजन को आपूर्ति र सामाग्री को थर्मल चालकता हो।
पोस्ट समय: डिसेम्बर 21-2020